AMATHULUZI AMASHA OKUXHUMANA
Date:1 June 2018 Author: Brendon Petersen Tags:Empowerment Issue, isiZulu, New tools of Engagement, samsung, Samsung DeX
Impahla yehhovisi ehambisana nesimo somsebenzi wesimanje
Cishe izinkulungwane ezine zabantu zisebenzela ekhaya isikhathi esiyingxenye sokusebenza e-US, ngokombiko wonyaka ka-2017 wabakwa-Global Workplace Analytics. Lokhu kungamaphesenti amangalisayo angu-2,9 ongoti abasebenza njalo ekhaya benokuxhumana nehhovisi elikhulu kanti lesi sibalo senyuke ngamaphesenti ayi-115 kusukela ngo-2005. Lokhu kuyisu elisiza amabhizinisi ukonga indawo yokusebenzela eya ngokuncipha kanjalo konga nemali yokuqasha amahhovisi. Akuzwakali kahle nokho ukuthi yiwo lo mbiko ofanayo, owaveza ukuthi lokhu kusebenzela ekhaya kwenzeka kubantu abangaphezu kweminyaka engu-35 ubudala.
Laba bantu bale minyaka yobudala kungaba yizizukulwane ngqo zabasebenzi basehhovisi besikhathi sikaFrank Duffy. UDuffy nguyena owaqhamuka nefemu i-DEGW enohlelo oludidiyela indawo yokusebenzela ngo-1971 ukusiza izinkampani zenze ngcono ukusebenza kwazo ngokumatanisa indawo yokusebenza nesu lokusebenza lebhizinisi kanye nezidingo zabantu. Lokho ayejwayele ukukusho nokho akuhambisani kahle, nendlela yamanje yokusebenza kwamahhovisi.
UDuffy ukholelwa yikuthi ihhovisi elisebenza kahle liyonikeza osebenzayo lokhu: “iwindi angalivula, umnyango angawuvala kanye nodonga angaluthinta.”
Ekanye nabanye abasunguli – kanye nabanye ake afunda nabo e-Architectural Association – uPeter Ely, uLuigi Giffione kanye noJohn Worthington, indlela yokwakhiwa kwehhovisi lakwa-DEGW ngokulandela ucwaningo yaletha uguqukongqangi ezindaweni zokusebenza ezibizayo. Indlela yezesayensi yokwakhiwa kwefemu yavumela ubuchwepheshe bezakhiwo ukuba bedlulele kwezinye izingxenye zenkampani. Ukudwetshwa kwezakhiwo kwasabela emicabangweni yamabhizinisi ebuka izindlela ezisheshayo nezisebenzayo zokuhlonza izidingo nokongiwa kwesikhathi nemali, ngokuthi abasebenzisi babambe iqhaza ekulawulweni kwendawo yokusebenza ngokugcizelela ukulawulwa kwempahla noma izakhiwo okubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwamabhilidi amakhulu.
Ifemu yabe isiphathwa ngu-Davis Langdon ngo-2009, owabe esevala ukudwetsha kwezakhiwo ifemu yabe isiphenduka isikhungo songoti abalulekayo. Kusukela lapho, kubonakala kunofuduko lokuyibalekela indawo endala yokusebenzela. Leyo ndlela isiphoqe izinkampani ukuba ziwunwebe umcabango wendawo entsha yokusebenzela, ngoba aye ngokuphela ama-oda amakhompyutha abekwa phezu kwetafula ngenkathi intsha ebizwa nge-Generation X iyishiya indawo endala yokusebenzela.
Ama-Laptop ayeyisidingo esikhulu ngokuqala kwekhulunyaka. Kwabe sekulandela inguqukongqangi ye- Ultrabook. Namuhla okubizwa ngombili emunye (2-in-1s) yikhona okuhamba phambili. Nokho kubukeka sengathi sesedlule unomphela isikhathi sekhompyutha endala. Kuphela yizimakethe zokuchitha isizungu ezisadinga kakhulu amakhompyutha abekwa etafuleni kanye nama-laptop anamandla amakhulu. Abantu abaphila impilo ejwayelekile badinga ukwenza umsebenzi wosuku mhlawumpe ne-Netflix ebusuku okudinga ushaje ibhethri kanye– labo-ke sebethanda kakhulu ama-smartfoni anobuso obukhulu. Izinkampani ezakha amafoni ziyazabalaza ngenhloso yokuletha amafoni anobuso obukhulu obuthi abulingane nomzimba wefoni.
Enye yezinkampani ezakha amafoni ezama ukuthola impahla yendawo yokusebenzela ezodla ubhedu olulandelayo ngu-Samsung. Ukukhishwa kwe-Galaxy S8 esho ngobuso obukhulukazi obuthi abulingane nomzimba, kwenza inkampani ikhiphe i-DeX Station, indawana eshintsha i-smartfoni isebenze ngokufanayo nekhompyutha ebekwa etafuleni.
Lokhu kuyawenza umqondo, njengoba amashiphu afakwa emafonini aphonsela inselelo futhi ehlule yonke impahla esebenza ibekwe etafuleni (desktop-grade silicon) ngamandla kanye nokusebenza.
“Ngicabanga ukuthi ukusebenzela kude nendawo yokusebenza sekuyinto ejwayelekile. Osomabhizinisi abancane badinga ukuhlala bekwazi ukwenza umkhiqizo noma ngabe bakuphi. Ngisho amabhizinisi amakhulu ayabona ukuthi abantu abathuthukayo bayayidinga inkululeko yokuxhumana namaklayenti noma bekuphi nokuba bakwazi ukusebenzisa izikhathi zabo okungezona zomsebenzi ukwenza umsebenzi,” kuchaza uCraig Fleischer, ongusekela mongameli wobuchwepheshe obudidiyelwe bakwa-Samsung South Africa. “Ngokubuka ngeso lokonga eNingizimu Afrika, ukwabela abasebenzi itafula ngokushintshana emabhizinisini amakhulu kubukeka kudlondlobala ngenxa yokongiwa kwendawo yokusebenzela. Ngisho abaphathi abakhulu bezinkampani sebesebenzela ezindaweni ezivulekile njengoba singasekho isidingo sokuba nehhovisi ukuze usebenze ngokunempumelelo. Njengenhlangano esebenza ngobuchwepheshe sizimisele ukuhlinzeka amathuluzi enza abantu basebenze ngempumelelo.”
Ngokukhishwa nokusabalaliswa kwe Galaxy S9 lokhu kusho ibuya futhi kuyi-DeX. I-DeX Pad entsha isombulule izinkinga eziningi eziphathelene nokuhlolwa kokusebenza kwephrojekthi. Okumqoka kakhulu, ayisenayo indawo yokuxhuma okokulalela, ngakho abasebenzisi bayo sebesebenzisa ikhebula elixhunywa kusikhiphamsindo esingaphandle (awukwazi ukufinyelela eplakini yokokuxhuma okokulalela kwi-DeX Station ngoba ibheke phansi kulokho ehlezi kukho).
Okokwenza ngcono ukusebenza kohlelo lwefoni osekuhambisan nayo kuvumela ifoni ukuba isebenze njengendawo ethintwayo ukuhambisa ikhesa (trackpad) ngakho kudingeka uzihlinzeke kuphela ngekhibhodi.
“Siyabona ukuthi izindleko zokulungisa indawo yokusebenzela zidala ubunzima kubantu, ngakho sebeqoka ukwenza umsebenzi wabo ezindaweni ezikude nalapho beqashwe khona besebenzisa izinkundla ngokwabelana nabanye noma ezitolo zamakhofi, noma basebenzele ekhoneni letafula egumbini lokudlela,” kusho uFleischer. “Bafuna ukuqhuba ibhizinisi labo ngokuba babukeke njengongoti kubantu ngaphandle.”
U-Samsung uke wathi ukubambezeleka elibele yimakethe yosomabhizinizi abancane nabanye abasafufusa lapho imali yokuqala ibhizinisi incane khona, kodwa ingqalasizinda edingekayo yokusetshenziswa kobuchwepheshe inkulu kakhulu, kube kugcizelelwa ukungabophezeleki endaweni eyodwa.
“La maklayenti afuna inkululeko kanti siwanikeza amathuluzi angawasiza ukwenza lokho. Sithola ukuthi abantu abasebenzisi kuphela i-data emathuluzini abo obuchwepheshe, kodwa futhi sebeqale ukwakha umsebenzi omningi. Yingakho siqhamuke ne-DeX.”
Kwenza ufune ukuthola kabanzi ukuthi kungani isu kuwukudayisa zombili izinhlobo ze-DeX macala onke. Umbiko omqoka yikuthi iSteshi sigxile endaweni eyodwa, noma singathi sibophezeleke endaweni yokusebenzela ngenxa yendawo okuxhunywe kuyo i-intanethi. Zombili izinhlobo zidinga amandla kagesi (adluliswa yi-adaptha yakwa-Samsung eshaja ngokushesha) kanjalo nokuba khona kwe-HDMI yokuveza umsebenzi.
“Ake ngichaze umehluko. ISteshi siyavuleka sibukeke njengetafula elijwayelekile. Usayidinga nokho ikhibhodi negundane, kanye, nakanjani, nemonitha. Noma iyiphi imonitha ye-HDMI ingalunga, kodwa futhi uyodinga amathuluzi obuchwepheshe okwengeza axhunywayo.
I-DeX Pad ngakwelinye icala ikunikeza inkululeko ngokususa ngisho isidingo sekhibhodi negundane kanti ubuso befoni buphenduka bube yithuluzi lokufaka imininingwane. Iphinda futhi ikuvumele,
ukwenza imisebenzi osuke uyidingela ikhompyutha ehlala etafuleni, ngokusebenzisa ikhibhodi engaphandle.”
Sesichithe isikhathi eside sithembele kuphela kwi-DeX-compatible Galaxy device ngezidingo zethu zonke zekhompyutha kanti nemiphumela iyancomeka. Lolu hlelo luyenza kahle yonke imisebenzi, ngaphandle kwenselelo yokuthi ayihambisani neseva yethu kamagazini. UFleischer naye wabuthola ubunzima ezama ukudidiyela uhlelo lwethu lwasekhaya iSamsung office network.
I-Office 365 isebenza kahle kakhulu nohlelo uma uyingxenye ngokulukhokhela njalo, kanti i-1 TB ye-OneDrive space yamahhala oyinikezwa kanye nayo iyindawo enkulu yokugcina izithombe zakho. Kodwa ama-Office apps asebenza ngokuphelele njengekhompyutha yasetafuleni uma esetshenziswa ku-DeX. Empeleni, singathi nje udinga ithuluzi lobuchwepheshe elilodwa ukuqhuba ibhizinisi lakho.
Ngesinye isikhathi sukuma ume ngezinyawo
Nansi indaba: indawo yokusebenzela akuyona kahle indawo engcono yokusebenzela abantu.
UDkt. uJosephine Chau we-University of Sydney’s School of Public Health wahola ucwaningo ngo-2015 okwatholakala kulo ukuthi uyakhula kakhulu umdlandla wokusebenza kubasebenzi abanethuba lokusebenza bemile phakathi kwamaminithi angu-60 kuya kwangu-90.
“Babika ukuthi bayeneliswa futhi bazizwe besebenza ngempumelelo kwabakwenzayo emsebenzini. Ngaphezu kwalokho, ingxenye yabasebenzi ababika ukuthi banomdlandla omkhulu usuku lonke yaphindwaphindwa kasikhombisa, kusukela emaphesentini ayisithupha kuya kwangu-44, uma besebenzisa amatafula abavumela ukuhlala/ukusukuma,” kusho udokotela.
Uyalazi ithuluzi lokwenza izimbobo odongeni, idrili. Kunocwaningo olukhulayo oluhlobanisa ukuhlala phansi isikhathi eside nengozi enkulu yokuba nezifo eziyisimbelambela njengokukhuluphala ngokweqile, isifo senhliziyo kanye Nohlobo lwesi-2 lwedayabhithisi. Ukuhlala sekufana nokubhema okusha, kuthiwa lokhu kuvamile ezigidini zabasebenzi abasebenza behlezi ematafuleni. Nokho isixazululo sale nkinga ayilula ukuthi singathi wukusukuma bame.
“Ukuhlala endaweni eyodwa – umile, uhlezi noma mhlawumbe ulenga esihlahleni – ngaso sonke isikhathi kudala izingozi eziphathelene nempilo. Wonke umuntu uthi ukuhlala wukubhema okusha; akunjalo. Yikuhlala ndawonye sonke isikhathi.” Lawo ngamazwi ka-Dale Higgins, ongumqondisi we-Humanscale obhekele ezokuthengiswa kobuchwepheshe bokuhlala /nokuma ezingeni lomhlaba, ohambisana ne-Formfunc ukusilethela eNingizimu Afrika ifenisha yamahhovisi yezinga eliphezulu neyenza uzwe uthokomele. Inkampani yake yahlola ngomsebenzi owayeyivolontiya yamsebenzisa etafuleni eliphakeme okwakudingeka asebenze emile basisusa nesihlalo sakhe.
“Sewake wezwa ngemilenze ye-shop-steward? I-calcium iqoqelana emilenzeni idale ukuthi kube nzima ukuhamba noma ukuma. Izinkinga zephezulu lomhlane enyangeni yesithathu zaziya ngokuba ngcono. Izinkinga zeqolo zanyamalala ngenyanga yesine. Wayencika endololwaneni isikhathi eside aze abe nenhliziyo encane kwabanye abantu. Lokhu kusho ukuthi inkinga yikuba sendaweni eyodwa sonke isikhathi,” kuchaza uHiggins.
I-Humanscale okwamanje wukuphela kwabakhandi befenisha yamahhovisi emhlabeni wonke abanesitifiketi esibizwa nge-Living Product (LPC) kwenye yamafekthri abo. Iplanti yaseDublin isizimele geqe ayisethembele kumasipala kanti wonke amanzi ewasebenzisayo emkhiqizweni wayo ibuye iwasebenzise kabusha abuyele
ohlelweni lwayo. Inkampani isithathe amagxathu amakhulu ukwenza umkhiqizo wabo ungabi nabungozi be-formaldehyde isize yanikezwa izinga le-LPC status ngomkhiqizo wabo omusha wakamuva wetafula le-QuickStand elikuvumela uhlale uphinde usukume.
Isithako sabo esiyimfihlo nokho, wubuchwepheshe obunesipringi. Azikho izihlalo zabo ezineqhuzwana olinyakazisayo ukuze uncike; kunalokho, zisebenza ngendlela yokubhalansisa isisindo. Ispringi esime sabheka phezulu sisebenzisa isisindo sakho ukuphikisana nesimo sakho sokuhlala ngentokomalo, okusho ukuthi noma ngubani ohlala kuso uthola umphumela ofanayo wentokomalo.
Lobu buchwepheshe buphinde budluliselwe esisombululweni sokuhlala/sokuma. “Amatafula e-QuickStand asebenzisa ispringi esifanayo. Simi sibheke phezulu, sibukeka sifana nespringi esincane segaraji kanti ubuhle bomkhiqizo wethu yikuthi amandla okukhuphula angakusiza ukukukhuphula ngesisindo esingu-16 kg. Wena okudingeka ukwenze yikuzimelela ngesisindo esingeqile kumakhilogremu amathathu bese siyanyakaza. Singabasiza abasebenzisi bawo (amatafula e-QuickStand) ukuxazulula izinkinga zobuhlungu bomhlane,” kusho uHiggins.
Abakwa-Formfunc banesivumelwane sokusizana ne-Cape Town’s Workshop 17 shared-space network. Amahhovisi anikezwa ifenisha, bese kuthi abakwa-Formfunc baqhube ibhizinisi behlezi lapho. Ifekthri yase Cape Town yilapho kuhlanganiswa khona izingxenye kanti isikhungo esiseceleni kwe-Lanseria okuyisona esiphaka sihambise ifenisha naso sesiseduze kakhulu ukuzimela.
Ukwabelana ngezindawo zokusebenzela kuyanda ngoba kunciphisa izindleko zobunikazi bamahhovisi okusebenzela. I-Workshop 17 isinazo zonke izidingo zehhovisi lesimanje, kodwa ubuningi bengilazi bungase bethuse.
“Okuhamba phambili manje ukwenza isakhiwo sehhovisi sibe nengilazi eningi ukuze kulethwe ingaphandle ehhovisi,” kuchaza uJanice Korte, ogogode ngokwakhiwa kwefenisha eyenza uzizwe uthokomele. Usebenzela i-Formfunc futhi wayeyingxenye yokwenza isivumelwano ne-Workshop 17. Akubukeki kumkhathaza ukucwebezela okuhambisana nengilazi. “Namuhla, ama-laptop amaningi afika nokucwebezela ebusweni bawo kodwa indlela yokususa leyo nkinga ukuhlala ungaqondani nomsuka wokukhanya ngakho ngeke kukuhluphe lokho kucwebezela.”
I-Humanscale ngasikhathi sinye isiqale ukwakha okuvimbela ukukhanya okucwebezelisa ubuso bamakhompyutha (CRT screens). “Ama-laptop amaningi namuhla afika nezikali zokukhanya ezibizwa ngamanithi ebusweni bawo, avumela ukukhanya kudlule kuyi-pixel,” kusho uHiggins. “Amaphaneli e-IPS avamise ukuba namanithi angu-200, lokhu kuyokwenza kube khona okwazi ukukubona noma ngabe ilanga lixhopha kanjani.”
Uma usebenzela ekhaya, kunganzima nokho ukudidiyela zonke lezi zindlela ezintsha zokwenza indawo yokusebenzela ihambisane nomuntu kahle, kodwa akhona amathiphu okukusiza uze waneliseke ngokuphelele ngomsebenzi. Into enkulu odinga ukuyishintsha, uma kungenzeka, yi-laptop yakho.
“Izinkinga zokusebenza nge-laptop yikuthi awukwazi ukwenza ubuso bayo buhambisane namehlo akho kanye nekhibhodi ibe sekupheleni kwetafula. Sonke isikhathi kukhona okuzoba yinkinga; uzoba nezihlakala ezibuhlungu noma intamo ebuhlungu na?” kusho uJosie King, ongomunye wakwaFormfunc ofundele ukwakha ifenisha yehhovisi ekwenza uthokomale. “Uma ungakwazi ukwehlukanisa ubuso be-laptop nekhibhodi ungakwazi ukukubeka ngendlela efanele. Ubuso budlala indima enkulu. Yilapho amehlo akho egxila khona–phansi phezulu, noma ebuka phezulu.”
Ungathenga into yokumisa ubuso besibili. Kanti futhi ungakhipha imadlana uthenge
i-QuickStand Eco uphile impilo engcono kakhulu yokuma. “Isikhathi esihle kakhulu sokuhlala/sokuma yilapho oyisebenzisayo ezicelela yena. Ukungena ehhovisi bese uqoka izindawo zokusebenzela ngokunganaki yindlela esheshayo kakhulu yokwehlisa izinga lakho lokuwasebenzisa,” kusho uHiggins. “Isikhathi esihle kakhulu yilapho umuntu eseyibonile indawo yokusebenzela esefuna ukuyizama.
“Indawo omi kuyo iyona ndawo elungile yokubeka indawo yokusebenzela. Kodwa okubaluleke kakhulu oshintshweni ngenkathi usuka ekuhlaleni uya ekumeni yikuthi ucishe ulungise ngokweqile indawo yokuma. Phusha ingezansi lesisu uliyise phambili onqenqemeni olungaphambili lwetafula bese uma uqonda thwi amahlombe athi ukusala ngemuva. Ngenkathi uma, umkhiqizo wethu uyanyakaza uqhele kuwe. Uyothola ukuhlomula ngokuncika onqenqemeni lwetafula ukuze likweseke, ikakhulukazi uma usaqala. Uma uzoncika kulona njengalapho uncika ebha ngoLwesihlanu ebusuku, kuzokubhedela. Udinga ukuzeseka wena.”
Uma uhlezi phansi, ukuzijwayeza okuhle yikuthi ubuso bekhompyutha bulinganisane namehlo akho futhi nezandla zakho zifinyelele kuyo. Ikhibhodi yakho negundane kufanele kube seduze nawe futhi uzizwele usebenza kahle kanti futhi konke okunye kumele ingalo yakho ikwazi ukufinyelela kukho ngaphandle kokuthi kube nesidingo sokuthi uncikele phambili.
Oh, kanti futhi udinga ukuhlehla uncike ube sesimweni esikukhululayo.
“Umqondo wakho udinga ukushintsha,” kusho uKing. “Hlehla uhlale uncike; yiyona ndawo enhle kakhulu. Ngenkathi uhlehla kakhulu uncika, yilesi sikhathi umgogodla wakho uba sendaweni efanele ngakho weseka kakhulu iqolo. Uma uhamba udlula emahhovisi akwa-Humanscale e-New York, kubukeka sengathi abantu balele kodwa akunjalo.”
Indawo yokusebenzela yakusasa yileyo oyenza ikulungele lokho manje. Uma uhlome ngamathuluzi afanele nomqondo olungile, ungazithola usebenza ngokunempumelelo njengokuthanda kwakho, noma ngabe ukuphi nendawo emhlabeni. Kungaba sendlini yengqungquthela noma lapho nihlangana khona niyithimba, ehhovisi noma kusofa, zimbalwa izithiyo ezingakuvimba ukuba usebenze ngempumelelo.
Electronic Skin Can Give Humans Directional Superpowers
The Tablet That’s Built for Exploring Alien Worlds
It Turns Out the Interstellar Visitor ‘Oumuamua Is Just a Little Guy
Pixel’s Night Sight is Declaring War on Flash Photography
How Does Bill Gates’ Ingenious, Waterless, Life-Saving Toilet Work?